Sawiro: Sanbaloolshe oo loolan adag wajahaya - Cosbole iyo xubno miisaan culus oo kursiga ku haysta - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Sanbaloolshe oo loolan adag wajahaya – Cosbole iyo xubno miisaan culus...
Sawiro: Sanbaloolshe oo loolan adag wajahaya – Cosbole iyo xubno miisaan culus oo kursiga ku haysta
Beledweyne (Caasimada Online) – Loolan adag ayuu wajahayaa kursiga HOP#058 ee beesha Cali-Madaxweyne – Xawaadle, kaas oo doorashadiisa berri lagu qabanayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Todoba musharax oo ay ku jiraan Madaxweynihii hore ee HirShabeelle Cali Cabdullahi Cosoble iyo Taliyihii hore ee NISA Cabdullaahi Sanbaloolshe ayaa ka mid ah xubnaha galabta ilaa caawa la siiyey shahaadada musharaxnimada kursigaas.
Nuur Iidow Beyle oo horay ugu fadhiyey kursigaan ayaa xalay shaaciyey inuu ka haray tartanka, kadib markii la soo saaray liiska guddiga soo xulaya ergada dooraneysa kursigaas.
Tartanka kursigaan oo ah mid furan ayaa xiiso gaar ah u yeelaya doorashadiisa, iyadoo musharaxiinta u taagan intooda badana ay yihiin rag miisaan ku leh siyaasadda.
Todobada xubnood ee shahaadooyinka musharaxnimada kursigaas la gudoonsiiyey ayaa kala ah:
1– Cali Cabdullahi Cusoble, Madaxweynihii hore ee HirShabeelle
2– Cabdullaahi Maxamed Sanbaloolshe, Taliyihii hore ee NISA
3– Eng. Yoonis Maxamed Nuur
4– Cabdulqaadir Xuseen Colow
5– Cabdullahi Axmed Xuseen
6– Ubax Cali Sheegow
7– Maxamuud Afdhuub Makaraan
Kursigaan waxaa sanadkii 2016-kii ku soo baxay Cabdullahi Sanbaloolshe oo iska casilay bilo kadib, markii Farmaajo u magacaabay Taliyaha NISA, xilligaasna waxaa qaatay Nuur Iidow Beyle oo hadda tartanka ka haray.
HOP#058 wuxuu ka mid yahay kuraasta ugu loolanka adag ee Beledweyne taalla, waxaana soo xirantay xodxodashadii xubnaha qaar ay ku hayeen hoggaamiyaha HirShabeelle Cali Guudlaawe oo ku adkeystay in kursigaas aan qof gaar ah loo xiri doonin oo tartankiisa uu yahay mid furan.